I-St-Anicet, Injabulo kalula - I-Airbnb
I-St-Anicet, Injabulo kalula
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Claude Et Liliane
U-Claude Et Liliane Ungumbungazi ovelele
I-chalet Le ptit bonheur isogwini lomsele omuhle obheke i-Lake St-François e-St-Anicet.
I-spa yonyaka wonke, ukudoba, ama-kayak angu-2 afakiwe, indawo yokubhukuda efudunyeziwe kanye netheku elikhulu ekupheleni komsele okungenzeka ubhukude.
Isikebhe ne-doo yasolwandle azitholakali! Yehla eduzane.
Ibhishi imizuzu engu-2 ngesikebhe.
Ilungele iholide lomndeni elihle.
Izwe lendawo yokuhlala
elingu-11 000wagen Ukuzingenela kwe-WiFi yamahhala.
I-chalet Le ptit bonheur iyingxube yesitayela sesimanje nesasemaphandleni. Ilungele umndeni! Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ingathatha abantu abangaba ngu-8 enamakamelo ayo angu-3. Iphinde ibe negumbi lokugezela eliphelele elinobhavu ozimele neshawa lengilazi kanye negumbi leshawa negumbi lokuhlanza izingubo. Futhi kuthiwani ngekamelo eliyinhloko lohlelo olukhulu lapho uzothola khona ikhishi, igumbi lokudlela, igumbi lokuphumula nendawo yokuphumula ene-fireplace yokhuni eguquguqukayo.
Igalari enkulu ene-BBQ, indawo yokubhukuda ebiyelwe, isethi ye-patio, i-gazebo, ne-spa kanye nendawo yomlilo yangaphandle. Imidlalo yebhodi, ikhebula ne-wifi, i-Netflix, i-DVD, i-Keurig coffee maker, letha izinkomishi zakho!
Izinkuni zinikezwa ngenani elilinganiselwe langaphandle nangaphakathi.
ye-ATV neyeqhwa Imizuzu engu-15 ukusuka e-St-Anicet Golf
Izindawo zokupaka ezingu-4
Indawo yokuhlala, ayikho IPHATHI ebekezelekile.
Sikucela ukuthi uhloniphe omakhelwane.
Umsindo ophansi kusuka ngo-10pm kuya ku-7am.
Ukubhukha iminyaka engu-25 nangaphezulu.
Sicela ukuthi usisize sigcine le ndawo ihlanzekile.
Isitolo sokudla ne-Saq imizuzu engu-10 ukusuka endlwaneni.
4.99 · 109 okushiwo abanye
I-chalet isendaweni yokuhlala exubene nabasebenzi bezinkathi ezithile, asebethathe umhlalaphansi. Amaminithi ukusuka kurempu yesikebhe, imizuzu eyi-10 ukusuka esitolo segrosa kanye ne-SAQ. Ebusika, jabulela i-ATV nemizila yemoto eqhweni kanye nechibi eliqandisiwe. Futhi imizuzu eyi-15 ukusuka e-St-Anicet igalofu kanye nemizuzu engama-30 ukusuka eValleyfield.
Ibungazwe ngu-Claude Et Liliane
Siyasebenziseka futhi siyasebenziseka ngaso sonke isikhathi. Singajabula ukuphendula noma yimiphi imibuzo yakho!
UClaude Et Liliane Ungumbungazi ovelele